Fiasa amin'ny PCAnywhere Bug miaraka amin'ny Vista | Martech Zone
Asabotsy, Jona 7, 2008 Zoma, Jolay 10, 2009 Douglas Karr
Tsy mbola nahita LiveUpdate na antontan-taratasy momba an'ity bibikely ity aho, fa toa nisy vokany izany mpampiasa PCAnywhere Vista hafa koa. Raha tokony hiandry Symantec Raha te hanana fanamboarana aho dia hitako fa ny motera fandikana, Winawe32.exe no mahatonga ny olana.
Kitiho ny bokotra havanana amin'ny biraonao ary safidio ny Task Manager.
Safidio ny kiheba Processes.
Asongadino Winawe32.exe ary kitiho Ny Process.
Rehefa nampitandremana dia kitiho OK.
Vohay indray PCAnywhere ary tokony ho hitanao izao ny Remoteo rehetra.
Tsara raha Symantec dia nanamboatra an'ity bibikely ity tamin'ny PCAnywhere, tena fanaintainana izany.
Tags: Androidkaratracinefyentana fampiroboroboana hetsikamitadiava kaonty twitterindostrian'ny findaydokambarotra ivelanykapila USB
WordPress: Tantano ny doka miaraka amin'ny minisitra Ad
Aug 22, 2008 amin'ny 5: 48 AM
Ny olana dia namboarina tao amin'ny pcAnywhere 12.5. Amin'izao fotoana izao dia ao amin'ny beta amin'ny http://betanew.altiris.com/BetaProducts/PCAnywhere125Enterprise/tabid/148/Default.aspx
Ity ny zava-mitranga:
pcAnywhere manager (winaw32.exe) dia mandefa SessionController.exe. Raha winaw32.exe fotoana alohan'ny sessioncontroller.exe dia nametraka, avy eo nanjary efijery banga. Mety hitranga izany raha sahirana ny rafitra amin'ny fotoana hanombohana pcaw32.exe.
Raha mitranga tsy tapaka io dia manandrama mandefa SessionController.exe aloha, miandry segondra vitsy ary avy eo mandefa mpitantana pcAnywhere. Tokony handeha izany.
Sep 16, 2008 amin'ny 6: 36 AM
Ity olana ity dia namboarina tao amin'ny famoahana pcAnywhere andiany 12.5 beta. Azonao atao ny manandrana an'ity scenario ity na dia be atao aza ny rafitrao.
Sep 28, 2008 amin'ny 10: 49 AM
Ka ny 12.1 izay naloako dia tsy mandeha ary tsy misy resaka patch azo alaina avy amin'ny symantec.com. Avelao aho hamina, ny kinova 12.5, misy, raha te handoa ny vokatra indray ianao ary mandritra izany fotoana izany dia very mpanjifa. PcAnywhere dia, nandritra ny taona maro lasa, nivadika ho fako tsy misy fotony, fandaharana sy fitsapana tsy mitongilana loatra, ny tsy fahampian'ny tompony sy ny andraikitra dia miharihary loatra ho an'ny olona toa ahy izay nanao kaody tamin'ny fiteny 8 samihafa ary manohana ireo rafitra hivelomana
22 Okt 2008 amin'ny 4:57 PM
Ny orinasanay dia nampiasa pcAnywhere ho an'ny fitantanana lavitra nandritra ny roapolo taona izao. Ireo hadisoana tato amin'ireo kinova farany (11.0 no ho miakatra) dia nanjary nahasosotra, ary hitanay fa ny kinova Enterprise an'ny RealVNC dia manao asa mitovy amin'izany, mampiasa loharanom-pahalalana kely kokoa, noho ny vola kely isaky ny mametraka… ary tsy manana lolompo ny fahafahako mampiantrano fivoriana iray isaky ny mandeha.
Hamelabelatra: Ny fampiasana ny fampiasa "Call Remote" an'ny mpampiantrano pcAnywhere dia mifamatotra ny mpanjifa, satria ilay Remote iray ihany dia tsy afaka manana 2 Host "miantso" azy amin'ny fotoana iray. Amin'ny maha-coder-n'ny tamba-jotra ahy dia tsy misy dikany amiko izany. Tsy manana an'ity olana ity ny VNC, ary toa “miasa fotsiny”, na dia amin'ireo milina izay pcAnywhere aza tsy hipetraka akory.
Ny kinova Enterprise an'ny RealVNC dia miasa amin'ny Vista tsy misy olana, na dia tsy afaka mihazakazaka serivisy amin'ny Vista aza ilay kinova maimaimpoana "host" (mihaino tsara fotsiny, fa mamerina ny fifandraisana avy hatrany isaky ny mifandray ianao). Ho fanampin'izany, VNC dia sehatra fifampitohizana ary miasa "ivelan'ny boaty" amin'ny tontolo Linux misy sary, fa kosa ny mpampiantrano pcAnywhere dia tsy afaka mihazakazaka Windows (tm) fotsiny.
Wow, toa plugina ity. Na izany aza, tsy mifandray amin'ny RealVNC aho amin'ny lafiny hafa ankoatry ny maha mpanjifa tena afa-po ahy, taorian'ny fanodikodinan'ny pcAnywhere sy ny quirks dia nanery anay hitady vokatra fitantanana lavitra hafa. Mbola mampiasa pcAnywhere amin'ny toeran'ny mpanjifa napetraka izahay, saingy tsy mividy fahazoan-dàlana vaovao amin'izy ireo.
11 Feb 2009 tamin'ny 12:53 maraina
Tsara, ny kinova alohan'ny 12.1 dia tsy mandeha amin'ny Vista, ka nividy 12.1 aho. Hitako fa tsy misy patch ho an'ny 12.1, raha ny tena izy, tsy mieritreritra intsony ny 12.1 na dia efa eo an-tsena aza izy io tsy ela akory izay, saingy faly ianao mivoaka ary mandoa kinova 12.5 hafa. ankehitriny.
Mar 16, 2009 amin'ny 7: 36 AM
mab, tokony ho afaka hahazo 12.5 maimaim-poana ianao. Maimaim-poana ny fanavaozana izay tsy mampitombo ny isa kinova lehibe (ny 12). Mety tsy maintsy hifandray amin'ny fanohanany ianao, manaintaina izany saingy nanatsara ny 12.0 hatramin'ny 12.1 tamin'ity fomba ity aho.
Sep 24, 2009 ao amin'ny 5: PM PM
Na ny 12.5 aza dia flakey. Tsy maintsy ataoko ambany ny kilasy ny maody garphic lavitra mba hanombohana na hihazonana fifandraisana azo antoka. Miandry fotoana kely fotsiny aho dia manombatombana ny VNC ho solony. PCA izao dia maty raha ny fahitako azy. Toa tsy manohana an'io i Symantec ary tsy miraharaha izany.
Raha misy mahalala ny fanavaozana Symantec PCA, fonosam-panompoana sns sns mandritra ny 12.5 azoko antoka fa te hahafantatra momba izany aho.